सलमानको भारतमा हिरोइन को ?
सलमान खानलाई लिएर अतुल अग्निहोत्री नयाँ फिल्म बनाउँदै छन् । ‘भारत’ नामको यो चलचित्रलाई अलीअब्बास जफरले निर्देशन गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘सुल्तान’ र ‘टाइगर जिन्दा है’जस्ता फिल्म बनाएपछि अली सलमानका प्रिय निर्देशक बनेका छन् । त्यसैले उनकै सिफारिसमा अली भारत बनाउँदै छन् ।
२०१९ को इदमा रिलिज हुने भारतमा सलमानकी हिरोइनचाहिँ को होलिन् त ? हिरोइन को राख्ने चर्चा हुँदै गर्दा अलीले फरक इच्छा दर्शाए । यसअघि कहिल्यै सलमानसँग काम नगरेकी हिरोइन राख्ने उनको इच्छा रह्यो ।
यसै क्रममा दीपिका पादुकोणको नाम अगाडि आयो । दीपिकाले पहिले पनि कैयौँपटक सलमानसँग फिल्म गर्ने इच्छा जनाइसकेकी छिन् । भारतको सुटिङ सुरु हुने समय अझै धेरै बाँकी छ । दीपिकालाई निश्चित गरेपछि सुटिङ मिति तय हुने बताइएको छ ।
यसअघि दीपिकाले सलमानका कैयौँ फिल्ममा काम गर्न चाहेकी थिइन् । ‘प्रेम की प्रेमिका नही बनी’, ‘ट्युबलाइट’लगायत फिल्ममा उनले सलमानकी हिरोइन बन्न चाहे पनि अन्य फिल्ममा व्यस्त रहेकाले इच्छा पूरा गर्न पाएकी थिइनन् । अब भारतका लागि प्रस्ताव आएपछि उनले स्विकार्ने सम्भावना धेरै छ ।